XAQ AYUU U LEEYAHAY MAXAMED CUMAR CARTE INUU DHIIRIGELIYO HORUMARKA DALKA IYO DADKA!!!! | Somaliland.Org
December 30, 2011	Waxaa layaab iyo fajicisaa eedeynta iyo sharaf xayuubinta lagu samaynaayo masuuliyiinta Urur Siyaasadeedka qaarkood sidda Gudoomiyaha Urur Siyaasadeedka DAMAL Mudane Maxamed Cumar Carte oo Warqadda Hargeysa ka soo baxda ee Jamhuuriya ku eedeysay inuu xidhiidh la lahaa qunsulka arimaha Somaliya ee fadhiisinkiisu yahay magaala madaxda wadanka Kenya ee Nairobi mr Bob Patterson.
Hadaba sidda waraaqda ka soo yeedhay Maxamed Cumar Carte waxuu olole iyo dadaal weyn ugu jirey siddii wadanka looga qaban lahaa doorashooyin xora oo xalaala, isla markaasina bulshadda caalamka qaylo dhaan loogu diri lahaa in cadaadis lagu saaro Xukumaddii Rayaale Kahin iyo inay lagama maar maan tahay in la qabto doorashadda, taasi oo sidda Jamahuuriya sheegtay oo kala hadlay qunsulkaasi.
Hadaba inkasta oo shacabka reer Somaliland oo dhami baahi weyn u qabey qabashadda doorashadda Madaxweynaha si dalku uu u helo isbedelka iyo xorumarka maanta uu gaadhey. Hadaba su,aasha isweydiinta mudani waxay tahay Maxamed Cumar arinta ma amaan iyo bogaadin ayuu ku leeyahay mise ceeb iyo canaan ayuu ku leeyahay? Su,aashaasi jawaabteedu waxay tahay Mxamed Cumar Carte amaan iyo bogaadin ayuu ku leeyahay arintan, waayo waxuu ahaa muwaadin ka tirsan Xukumadda, isla markaasina jecel oo ay dhab ka tahay horumarka iyo geedi socodka Dimiquraadiyadda iyo loolanka xalaashaa ee dalkeenu baahida weyn u qabey oo ahayd in doorashadda madaxweynaha dalka lagu qabto mudaddii loo yacimay, arintaasi iyo qabashadda doorashadda oo jiitan iyo muddo dhaaf aad u weyn ka jirey oo Xukumaddii Mudane Daahir Rayaale sharciga iyo qawaaniinta dalka u yaaley iyo weliba mudeyntii qabashadda doorashadda madaxweynaha oo mudaddii loo cayimay in badan la jebiyey balantii iyo go,aamaddii sidda wadda jirkaa laysula gaadhey ee Asxaabta mucaaridka ee Kulmiye iyo Ucid iyo Xisbiga UDUB ee wakhtigaa taladda hayey isla meel dhigeen.
Badankoodda muwaadiniinta reer Somaliland waxay hadal dheer iyo mid gaabanba ku qaylinayeen siddii doorashadda madaxweynaha u dhici lahayd. Hadaba dadaaladan ayaa waxay keeneen in Axmed Siilaanyo ku guulaysto doorashaddii loo jeelka qabey ee shacabka reer Somaliland badankiisu doonayeen inay dalka ka qabsoonto sidda arintan Maxamed Cumar lagu eedeynaayo oo aan ahayn wax micno weyn samaynaaya ee ahayd daacadnimo iyo cadaalad dalkan iyo dadkani uu helo.
Hadaba maxaa maanta keenay in arin waxtara laga dhigo waxyeelo oo rag dan gaara lahi ku waxyeeleeyeen geedi socodka siyaasadeed ee shaqsiyaad gaara Sidda Mudane Maxamed Cumar Carte oo ah Gudoomiyaha Urur Siyaasadeedka DAMAL ee dhawaan lagaga dhawaaqay magaaladda Hargeysa. Ma qabo in halkaasi wax ku jiraa iyo arin mahiimad ummadda u leh soo bandhigideedu inay tahay, laakiin ay u muuqato midi midi ku tag iyo jid goyn loo gelaayo hadafka iyo hanaanka calaashaa ee shaqsi kastaa leeyahay, isla markaasina uu doonaayo inuu kaga qayb qaato Siyaasadda dalka Jamhuuriyadda Somaliland.
Hadaba haddii xaalku yahay sidda waraaqdu sheegtay, waxay ila tahay Maxamed Cumar Carte waxuu dhimay ma jirto ee intaasi shacabka reer Somaliland oo dhami waa lahaa iyo nin kasta oo ay u muuqanaysey isbedel Siyaasadeed oo dalkan ka dhaca. Isbedelkii Siyaasigaa ee dhacay weynu u jeednaa furfurista Siyaasigaa ee uu dhalay iyo sidda rag badani maanta ay u samaysteen Urur Siyaasadeed ay kaga qayb qaataan Siyaasadda dalka iyo habka asxaabta badan ee maanta dalka ka jira.
Arintu si kasta ha ahaatee waxay u egtahay in shaqsiyaad aan raali ka ahayn Maxamed Cumar Carte iyo Urur Siyaasadeedkiisa inay sharaf ridid iyo caqabad kaga dhigayeen arintan maanta sidda foostadda la soo riixey oo ummadda yaab iyo lama arag ku noqotay waxa keenay maanta in waraaqaha qaar qoraan. Hadaba maxamed Cumar Carte waxba muu dhimin ee waa muwaadin xalaala oo dheerigeliyey habka dimiruqaadiyadda iyo siddii loo heli lahaa doorasho xalaala oo dalka ka qabsoonta, intaasi iyo in ka badana dadkoo dhan ayaa lahaa oo dhawaaqoodu meel walba gaadhey ee maxaa keenay Maxamed Cumar Carte maanta? Maxamed Cumar Cartena waxaan leeyahay haddii arintaasi tahay sidda waraaqdaasi u sheegaty, wax weyn ayaad qabatay, waxaanad samaysay geesinimo iyo muwaadinnimo weyn oo shacabku uu markasta xasuusnaan doono ee hour socod oo marnaba yaanay qalin daar iyo hantaaqo ku keenin hankaaga Siyaasigaa iyo doorka Urur Siyaasadeeka DAMAL.
Cabdilaahi Cali Xassan John
Previous PostKu simaha Duqa Caasimadda Hargeysa Oo Ka Jawaabay cabasho ka soo yeedhay dadweynaha xaafada 150-kaNext PostWasiirka Hawlaha guud oo ka waramay waxyaabihii u qabsoomay sanadkan 2011-ka	Blog